Ulwandle eClifton Beach Cairns
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguSen
Wamkelekile kwiKhaya lam!
Wowu! Ngaba unokukholelwa kuyo? Olo lwandle ulubona kumfanekiso ongentla luziimitha ezingama-200 nje ukusuka kwikhaya lam.
Ilungile lo nto. Ayilokhadi lokuposa okanye umfanekiso wesitokhwe osuka kwisiqithi esithile setropiki. Lulwandle lwam olo! Kwaye ukuba uhlala endaweni yam, inokuba lulwandle lwakho - ubuncinci ngexesha lokuhlala kwakho.
Ndihlala kwikhaya elihle, langoku kwindawo engaselwandle eClifton Beach eCairns. Isitrato sam sithe cwaka kakhulu, kwaye ukuhamba nje ngomzuzu ukusuka eClifton Beach (ewe, iyafana efotweni). Yindawo ekhuselekileyo, ehloniphekileyo kwaye ihlelwe emva kobumelwane.
Kwaye yonke nje imizuzu engama-40 ukuya ePort Douglas kunye nemizuzu engama-30 ukuya eKuranda Village. Uninzi lwezinto ezikhangayo eziphambili zikufutshane nekhaya lam kunesixeko kwaye abakhenkethi baya kubonelela ngodluliselo kuzo zonke ezo zinto zinomtsalane kubandakanya iGreat Barrier Reef.
Isikhululo seenqwelomoya siyimizuzu engama-20 ukuya eMzantsi ngelixa umbindi wesixeko unemizuzu engama-30 kwicala elinye kwincopho yezithuthi. Nokuba uhlala phi eCairns, ndincoma imoto eqashisayo njengoko ukuqhuba apha kulula kwaye kuya kukunika inkululeko yokujonga lo mmandla ngexesha lakho.
Indlela yokuphila apha yokuphumla kwaye izolile ijikelezwe yindalo kunye nezinto ezinomtsalane zendalo kuzo zonke iindlela.
Ukuba ukhetha ukuhlala nam, kwindawo yakho yokuhlala ligumbi elitofotofo labucala, ibhedi yokumkanikazi esemgangathweni, igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo, ibhafu kunye nendlu yangasese eyahlukileyo. Ndinamagumbi ama-2 adweliswe ku-Airbnb.
Izibonelelo zibandakanya i-ADSL 2 ye-wireless enesantya esiphezulu kwikhaya lonke, kunye ne-BOSE 5.1 inkqubo yethiyetha yasekhaya kunye ne-70 intshi yesikrini esibanzi sikamabonakude. Unokukhuphela nayiphi na imuvi kwi-iTunes ngeApple TV ukuba uziva ufuna ukuhlala ubusuku bonke.
Ndiyakuvuyela kwakhona ukukunika ulwazi malunga nendlela yokufumana ubuninzi bokuhlola ummandla kwimbono yendawo, ngoko unokuphepha imigibe yabakhenkethi kwaye usebenzise "iimfihlo" zethu zendawo.
Izinto Omawuzenze kwaye Uzibone… Ukuhamba nje.
Malunga nemizuzu engama-20 ukuhamba ukuya eMantla yiPalm Cove, yenye yezona ndawo zintle zaseCairns. Zingaphezu kwama-20 iindawo zokutyela / iikhefi ecaleni kwendlela egangathiweyo engaphaya kwemithi yesundu esecaleni konxweme. Indawo yokutya isukela kukhetho lweenkwenkwezi ezintlanu zamava amnandi ukuthabatha intlanzi kunye neetships.
Iziko elitsha, lale mihla leClifton Village Shopping Centre elineColes Supermarket, iOstreliya Post, iiBhanki, iZiko lezoNyango, iKhemesti kunye nezinye iivenkile ezizodwa luhambo lwemizuzu eli-10. Indawo yokutyela endiyithandayo yaseThai ikwalapha kunye nepizzeria kunye nentlanzi egqwesileyo kunye netshiphu.
I-Cairns Night Zoo ikwakukuhamba nje, malunga nemizuzu eli-15. Ngumtsalane okumgangatho wehlabathi onezilwanyana zemveli zase-Australia, kubandakanya iingwenya, iikhangaru, iikoalas, iinyoka kunye nezinye izilwanyana. Jonga iwebhusayithi ngeenkcukacha ezithe vetshe.
IPort Douglas (jonga ifoto) yimizuzu engama-40 uqhubela emantla ecaleni kweyona ndlela idumileyo yaseOstreliya (jonga ifoto). Indlela ijikeleza ngaselunxwemeni ineembono ezintle, eziphefumlayo zoLwandlekazi lweCoral endleleni. IMossman Gouge eyimizuzu engama-20 kumntla wePort Douglas yenye yeendawo endizithandayo zokutyelela.
I-Pristine Cape Tribulation yimizuzu eyi-120 ukuya emantla. Kulapho iDaintree Rainforest idibana neGreat Barrier Reef. Indawo ekukuphela kwayo ehlabathini apho iindawo ezimbini zelifa lemveli zidibana khona. Zininzi iihambo zasimahla zamahlathi emvula kwi-Cape Tribulation.
I-Kuranda Village kunye ne-Barron Falls (jonga ifoto) yimizuzu nje ye-30 ukuya ngasentshona yeClifton Beach. IKuranda yilali yeboutique enobugcisa bokwenyani baseOstreliya kunye nobugcisa, iikhefi kunye nabakhenkethi abakhenkethi, nto leyo eyenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi kulo mmandla.
Zininzi ezinye izinto ezinomtsalane kwimizuzu nje embalwa yokuqhuba. Ezi ziquka i-Skyrail ethandwa kakhulu, i-AJ Hackett Bungy Jumping, iindawo zokutyela zaseTrinity Beach, iZiko le-Tjapukai Aboriginal, i-Hartley's Crocodile Adventures, i-Rex Lookout, i-James Cook University (i-JCU), i-Lake Placid, i-Copperlode Dam kunye ne-Barron Gorge, ukukhankanya nje ezimbalwa. Bendisoloko ndisa iindwendwe zam kuninzi lwezi ndawo.
I-Sunbus (izithuthi zikawonke-wonke) eziya esixekweni zinokuthathwa ngakwi-Arlington Esplanade ngaselwandle, okumgama wemizuzu embalwa ukusuka ekhaya.
I-Clifton Beach ine-BBQ's, ibala lokudlala labantwana kunye nepetroli yaselwandle yokulondoloza ubomi emsebenzini.
Kukho iindlela zeebhayisekile phakathi kweClifton Beach kunye nazo zonke ezinye iidolophu zaselwandle kwaye inkampani eqashisayo iya kuhla kwaye ithathe iibhayisekile ekhayeni lam.
Yiza wonwabele enye yezona ndawo zintle ngokwendalo naphi na emhlabeni.
Injongo yam kukubonelela ngemvakalelo yokuba nekhaya elikude kumava asekhaya kwiindwendwe zam kwaye ndizabalazela ukuqinisekisa ukuba iholide yakho iqhuba ngokutyibilikayo ngandlela zonke.
Iminqweno efudumeleyo kunye nohambo olukhuselekileyo.
Ixesha elilindileyo umhlobo wam uJulie unokukuthatha kukhenketho losuku lwabucala, lobuqu ukuya eCape Tribulation/Daintree, Milla Milla Water Fall Circuit, Tablelands, Kuranda kunye nezinye iindawo ezininzi ngomrhumo ofanelekileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Sen
Lixesha lakho elixabisekileyo leholide kwaye ubungakanani bonxibelelwano onqwenela ukuba nalo nam bumiselwa nguwe wedwa. Ukuza kuthi ga ngoku ndiza kusebenzisana nawe kakhulu okanye kancinci njengoko unqwenela.
Ndinobomi obuphithizelayo bentlalontle kwaye ndiyayazi iCairns ngokusondeleyo nabahlobo abaninzi, abanini bekhefi / kwindawo yokutyela, ababoneleli ngenkonzo njalo njalo. Uhlala umenywa ukuba undimanye ukuba uyafuna.
Izinto endithanda ukuzenzela iindwendwe zam;
Ukupheka kunye nokutya
Ukubukela iimuvi okanye amaxwebhu
Ukukusa kwimicimbi yentlalontle
Ukunceda ngokubhukishwa kwabakhenkethi
Ukukunceda ucwangcise ukhenketho kunye nokucacisa iinkcukacha ezifihlakeleyo ezinganikwanga kwizixhobo zentengiso
Ukuqinisekisa ukuba wonwabile kwaye ukhululekile yinto yam yokuqala.
Lixesha lakho elixabisekileyo leholide kwaye ubungakanani bonxibelelwano onqwenela ukuba nalo nam bumiselwa nguwe wedwa. Ukuza kuthi ga ngoku ndiza kusebenzisana nawe kakhulu okany…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Clifton Beach